Guddiga Adeegga Macallimiinta ee TSC ayaa sheegay in laso xulay macalimiinta bilaabaya tababarka Manhajka Cusub ee CBC-da - Iftiin FM
Guddiga Adeegga Macallimiinta ee TSC ayaa sheegay in laso xulay macalimiinta bilaabaya tababarka Manhajka Cusub ee CBC-da
by Iftiin FM Reporter April 18, 2022
Guddiga Adeegga Macallimiinta ee TSC ayaa sheegay in laso xulay macalimiinta bilaabaya tababarka barnaamijka Manhajka Ku-saleysan Kartida ka hor xilliga kala guurka dugsiga hoose ee sanadka soo socda.
Isagoo ka hadlayay maalintii koobaad ee shirka sanadlaha ah ee ururka madaxda dugsiyada sare ee Kenya ee 45-aad ee KESSHA ee ka socda magaalada Mombasa ayaa gudoomiyaha ururka Alfred Indimuli waxa uu ku celceliyay in ay socdaan qorshayaal lagu doonayo in si habsami leh ay caruurta ugu gudbaan dugsiyada sare.
DHAGEYSO : Odayaasha Garissa oo baaq uu direen Dhalinyarada.
William Ruto: Hoogaanka sare ee dalka ayaa looga fadhiya in uu shacabka Mideeyo.
Indimuli ayaa sido kale xusay in shirkan oo socon doona muddo toddobaad ah, isla markana ay ku dadaali doonaan sidii ay u heli lahaayeen habab ay shirka ku kenaan daneeyayaasha waxbarashada muhiimka ah si ay gacan uga geystaan maalgelinta iyo maaraynta caqabadaha dugsiyada .
Raila Odinga oo baaq uu diray Ganacstada Soomaliyeed ee Ismaamulka Nairobi
Shirka oo halku-dhiggiisu yahay ; “Dib-u-eegista mustaqbalkayaga “, ayaa isu keenay sagaal kun oo macalimiin ah, bandhigayaal iyo marti caalami ah.
Beeralayda kafeega ee degmada Trans Nzoia oo baaq loo diray
Xisbiga UDA ayaa ku dhawaaqay taarikhda la qabaanayo doorashada xisbiga dhexdiisa ah ee ismaamulada Nairobi, Baringo iyo Makueni .